ချက်ကြီး's Page - MyanmarITPro - A Social Network for Myanmar IT Professionals
Maleအတည်တကျမရှိMyanmar Share on Facebook
Blog PostsDiscussions (4)EventsGroups ချက်ကြီး's Likes ချက်ကြီး's Discussions
ံHTML နဲ့ကိုယ်ရေးတာကိုပဲမြင်နှိုင်တဲ့ (မပြင်နှိုင်တဲ့)scroll ပါတဲ့Box ဘယ်လိုရေးရမလဲဟင်
ံHTML နဲ့ကိုယ်ရေးတာကိုပဲမြင်နှိုင်တဲ့ (မပြင်နှိုင်တဲ့)scroll ပါတဲ့Box တဲ့ ဟာလေးကိုဘယ်လိုရေးလို…Continue Started this discussion. Last reply by Tun Zarni Kyaw Nov 29, 2009. co.cc ကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်ရမှာလဲပြောပြကြပါခင်ဗျာ
ကျွန်တော်စမ်းကြည့်ချင်လို့ ပါ၊၊အကိုတွေအမတွေအနေနဲ့ ပြောပေးမယ်ဆိုရင်အတိုင်းထက်အလွန်ကျေးဇူးတင်မိမှာပါ၊၊ Started this discussion. Last reply by Mg Pyone Nov 28, 2009. View All
ချက်ကြီး has not received any gifts yet
At 12:56pm on November 28, 2009, zawko said… sorry Fri
မထမတစ်ခါ ကျွန်တော် တင်ပေးလိုက်တဲ့ link File လေးက HyperLink မှာမပေါ်လို့ပါ။
အခုတစ်ခါ Website လေးကိုတော့ အောက်မှာတစ်ခါတည်း ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။
အခုကျွန်တော် တင်ပေးလိုက်တဲ့ Website လေးက Screen Capture ဖမ်းတဲ့ Software အများကြီးရှိပါတယ်။
download လုပ်ပြီးတော့ မိမိကြိုက်တဲ့ Screen Capture file ကို Install လုပ်ပြီးတော့ အသုံးပြုလို့ရပါပြီ။ Website link ဖိုင်ကိုအောက်ကယူလိုက်ပါ။
သုံးကြည့်ပါအုံး။ No comments yet!